दिउँसो एक्कासी परेको पानीले बानेश्वर सडकखण्ड जलमग्न ! – My Blog
No Comments on दिउँसो एक्कासी परेको पानीले बानेश्वर सडकखण्ड जलमग्न !
काठमाडौं । आज दिउँसो काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भएको छ । बानेश्वर क्षेत्रमा परेको पानीले आवतजावत गर्न निकै कठिनाइ भएको छ । अनामनगर क्षेत्रमा परेको पानीले एउटा स्कार्पियोको आधा भाग डुबेको छ । बस पर्खि रहेका यात्रुहरु भारी वर्षाका कारण निकै विचलित भएका छन् । दिउँसो एक्कासी परेको पानीले बानेश्वर सडकखण्ड जलमग्न भएको छ । सडकमा भारी वर्षा खोला बनेर उर्लेको छ ।
← वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि खुसीको खबर : अब यसरी सजिलै जान पाइन्छ → पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुनम, असार २७ गते आईतबार, आज तपाई तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल